Allgedo.com » Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowladda KMG ah ee Soomaaliya oo ka tacsiyeysay geeridii ku timid marxuum Ambassador Jaamac Dirir Guuleed.
Home » News » Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowladda KMG ah ee Soomaaliya oo ka tacsiyeysay geeridii ku timid marxuum Ambassador Jaamac Dirir Guuleed. Print here| By: allgedo.com:
Tuesday, July 24, 2012 //
1 Jawaab Muqdisho, Somalia (AOL) – Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowladda KMG ah ee Soomaaliya waxay tacsi u direysaa ehelada, qaraabada, asxaabta iyo dhamaan umadda Somaaliyeed, ayadoo uga tacsiyeyneyso geeridii naxdinta laheyd ee ku timid Allaha u naxariistee marxuum Ambassador Jaamac Dirir Guuleed oo 23-kii July lagu aasay magaalada London oo ah caasimadda dalka Ingiriiska.
Akhri Tacsida oo dhan
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Dowladda KMG ah ee Soomaaliya oo ka tacsiyeysay geeridii ku timid marxuum Ambassador Jaamac Dirir Guuleed. " Dhasheegduur says:	July 24, 2012 at 4:26 pm	Inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun; Ilaahey Naxariistii jano ha ka waraabsho waa bil kheyresan ee ilaah samir iyo iimaan ha kasiiyo eheladiisa iyo dalkii uu ka tagey. alaayaraxma